कुनकुन विरामीलाई से’क्सले निकै फाइदा गर्छ ? – Kavrepati
Home / रोचक / कुनकुन विरामीलाई से’क्सले निकै फाइदा गर्छ ?
admin3weeks ago	रोचक Leaveacomment 187 Views
मानिसहरु यौ’ न स’ म्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौ’न स’ म्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ । नियमित से’ क्स ग ‘र्दा के के फाइदा हुन्छः
-ब्लड प्रेशरः उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि नियमित से’क्स फाइदाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित से’ क्स गर्दा उच्च रक्त’ चाप नियन्त्रण हुने शोधको दावी छ ।
-हृद’यघातबाट कम खतराः नियमित से’ क्स गर्दा हृद’यघातको खत’ रा पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । नियमित से*क्स गर्दा शरीरमा एस्ट्रोजन र टेस्टोस्टेरोनका संतुलन बनि राख्ने हुँदा हृद’ यघातको कम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
Previous काठमाडौमै एक युवकलाई ४ युवती सहित मिलेर नाङेझार पारे